गीतमा सेन्सरसिप चाहियो - जम्काभेट - साप्ताहिक
गीतमा सेन्सरसिप चाहियो
लोकदोहोरी गायनमार्फत चर्चामा छिन्– शान्ति श्री परियार । केही समयअघि सार्वजनिक भएको गलबन्दी गीतबाट उनको बेग्लै पहिचान बनेको छ । उनी औपचारिक रुपमा विगत ८ वर्षयता सांगीतिक क्षेक्रमा सत्रिय छिन् । ५ सयभन्दा बढी गीतमा स्वर दिइसकेकी परियारसँग अनामनगरमा साप्ताहिककर्मी महेश तिमल्सिनाको जम्काभेट :
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हौ ?
अहिले त गीतसंगीतमै व्यस्त छु । गलबन्दी गीत सार्वजनिक भएपछि त व्यस्तता अझ बढेको छ ।
लोकदोहोरी क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
म गीतसंगीतमा लागेको करिव १२ वर्ष भयो, तर औपचारिक रूपमा लागेको चाहिँ ८ वर्ष पूरा हुँदैछ । मैले गीत–संगीतमा स्थापित हुन धेरै नै संघर्ष गरेकी छु । म अहिले जहाँ छु त्यो मेरो संघर्ष र दर्शक–श्रोताहरूको मायाको प्रतिफल हो ।
बोलमाया र गलबन्दी आउनुभन्दा अघि र पछिको दैनिकीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
बोलमाया र गलबन्दी अघि पनि मैले धेरै गीत गाएको थिएँ । पहिलो एल्बम ‘घर छ तीनतले’ र दोस्रो गीत ‘एक तर्फी मायाले’ नै मलाई लोकदोहोरी क्षेत्रमा चिनाएको हो । त्यसपछि पनि मेरा धेरै गीत हिट भएका थिए । यद्यपि अहिले बोलमाया र गलबन्दी आइसकेपछि भने असिमित दर्शक श्रोताको माया पाइरहेकी छु । गलबन्दी पछि त लोकदोहोरी नरुचाउने दर्शक–श्रोताहरूसम्म पनि पुग्न सफल भएकी छु । दैनिकीमै परिवर्तनभन्दा पनि दर्शक श्रोताको माया बढेको आभास भैरहेको छ ।
गलबन्दी पछि कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
राम्रो भएपछि सबैले राम्रो नै भन्नुहुन्छ । सबैबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु । त्यसैले आफूले गरेको कामप्रति गर्व गरिरहेकी छु । त्यसमाथि पनि महिला दिदीबहिनीहरू मेरो काम देखेर गर्व गर्नुहुन्छ । उहाँहरू एउटा विकट गाउँबाट आएकी एउटी महिलाले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरूको यस्ता प्रतिक्रिया सुन्दा काम गर्ने उत्साह बढेको छ ।
तीजका गीतका लागि कस्तो तयारी छ ?
तीजका लागि अरुको ३/४ वटा गीत गाइसकेकी छु, तर विगत चार वर्षयता मैले आफ्नै एउटा तीज गीत सार्वजनिक गर्दै आएकी छु । यसपाली पनि गीत ल्याउने सोंच त बनाएकी छु, तर देश–विदेशका कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दा तयारी भने गर्न पाएकी छैन ।
भनेपछि, देश–विदेशका कार्यक्रमको ओइरो नै लागेको छ ?
ओइरो नै त होइन । पहिलेको तुलनामा अलि बढेको छ ।
विदेशको एउटा कार्यक्रममा गीत गाएबापत कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?
यति नै नभनौं । जे होस् राम्रै लिन्छु ।
अहिलेसम्म कतिवटा देश पुग्नुभयो ?
१४ वटा देश पुगिसकें । एउटै देशमा दुई तीन पटक पनि पुगेकी छु । त्यसैले पासपोर्टको पाना सकिएर अर्को पासपोर्ट बनाउने तयारीमा छु ।
अहिले महिनामा कतिवटा गीत गाउनुहुन्छ ?
त्यस्तो धेरै छैन, महिनामा ३० वटाजति पुग्छ । तीजका बेलामा अलि बढी हुन्छ ।
एउटा गीत गाएबापत कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?
१० हजार ।
तपाईं अभिनयमा खासै देखिनुहुन्न नि ?
मलाई अभिनयमा खासै रुची छैन । म गाउनमै स्पेसल छु जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको गीत छान्ने मापदण्डचाहिँ के हो ?
त्यस्तो खासै मापदण्ड छैन । यद्यपि समाजमा नपच्ने गीत गाउँदिनँ भन्ने प्रण गरेकी छु ।
व्यस्तता बढेपछि घरपरिवारको गुनासो त आउला नि ?
घरपरिवारले मेरो पेसालाई बुझ्नुभएको छ त्यसैले मलाई त्यति गाह्रो छैन ।
आफ्नो स्वरमा ताजगी ल्याउन के गर्नुहुन्छ ?
नियमित हार्मोनियममा रियाज गर्छु ।
सौन्दर्य स्याहारमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
म त्यति धेरै राम्री छैन । सामान्यतः लिपस्टिक तथा गाजल लगाउँछु ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा के भैदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
गीतमा सेन्सरसिप छैन । सेन्सर सिस्टम लागू भैदिए सबै अनुशासित र नियमबद्ध हुन्थे कि ?
आफ्नै गीतमा क्लेम आएपछि...
‘लभ डायरीज’ को गीतमा जम्यो सुशील र रुविनाको केमेस्ट्री
साइनोको आइटम गीतमा नीता
‘साइनो’ को गीतमा टिक-टक बनाउँदा पुरस्कार !
नेपाली गीतमा सन्नी लियोनीको ठूम्का, यस्तो छ भिडियो
मेरा केही गोप्य कुरा छन् श्रावण २४, २०७६
३५ लागे आर्यन, तर भन्छन्, ‘बल्ल जवानी चढ्दैछ' श्रावण २०, २०७६
डर्ट बाइक नै आनन्द श्रावण १६, २०७६
सोसल मिडिया समयको बर्बादी मात्र श्रावण ९, २०७६
हो, म एकदमै सिंगल असार २६, २०७६
मनका कुरा भन्न लजाउनु हुन्न असार १९, २०७६
सम्झनामा रहन चाहन्छु असार ६, २०७६
चलचित्र क्षेत्रका ९० प्रतिशत प्रेम असफल हुन्छ असार ४, २०७६
रिफेसनमा सेन्टिमेन्ट हुन्छ जेष्ठ २५, २०७६